UNkulunkulu waba inyama eyabizwa ngokuthi uKristu, futhi okuwuKristu okwazi ukunika abantu iqiniso elibizwa ngokuthi uNkulunkulu. Akukho okukhulu ngalokhu, ngoba uqukethe isiqu sikaNkulunkulu, futhi uqukethe isimo sikaNkulunkulu, kanye nobuhlakani emsebenzini Wakhe, umuntu angekuthole. Labo abazibiza ngoKristu, kepha bengakwazi ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu, bangabakhohlisi. UKristu akasikho nje ukubonakaliswa kukaNkulunkulu emhlabeni, kodwa futhi uyinyama embethwe uNkulunkulu njengoba ephethe futhi eqedela umsebenzi Wakhe kubantu. Le nyama akusiyo leyo endawo yayo ingathathwa yinoma imuphi umuntu, kodwa yileyo engathwala umsebenzi kaNkulunkulu ngendlela egculisayo emhlabeni, futhi ibonakalise isimo sikaNkulunkulu, imele uNkulunkulu kahle, futhi inike umuntu ukuphila. Esikhathini esingatheni, labo abazenza uKristu bayowa, ngoba yize bethi banguKristu, akukho abanakho okuwumgogodla kaKristu. Ngakho ngithi ubuqiniso ngoKristu ngeke buchazwe umuntu, kodwa kuphendulwa futhi kunqunywe uNkulunkulu Uqobo. Ngale ndlela, uma ufisa ngempela ukuthola indlela yokuphila, kumele uqale uvume ukuthi unika umuntu indlela yokuphila ngokuza Kwakhe emhlabeni, futhi kumele uyazise ngezinsuku zokugcina ukuthi uza emhlabeni ukuzonika umuntu indlela yokuphila. Lokhu akusiyo into yakudala; yenzeka njengamanje.
Okwedlule: Ingabe Bewazi? UNkulunkulu Wenze Into Enkulu Phakathi Kwabantu
Okulandelayo: Lungisa Izenzo Ezinhle Ezanele Ukulungiselela Isiphetho Sakho
I UNkulunkulu uwumthombo wokuphila komuntu; izulu nomhlaba kuphila ngamandla Akhe. Akukho okuphilayo okungazikhulula ekubuseni nasegunyeni likaNkulun…